Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Savorovoro ny Zoma Mainty tany Londres rehefa nitokona ny mpamily Tube
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • People • Fitsangatsanganana an-dalamby • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Ny fandehanana an-tongotra dia nanakorontana ny serivisy manerana an'i London tamin'ny Black Friday, iray amin'ireo andro fiantsenana be atao indrindra amin'ny taona, miaraka amin'ny varotra mandeha amin'ny fivarotana maro.
Nanao fitokonana faobe tamin'ny Black Friday ireo mpamily fiarandalamby London Underground Unionized, izay nilaza fa ny fialana dia nateraky ny "fanimbana ny fifanarahana efa misy sy ny fandaminana miasa mialoha ny fanokafana ny Night Tube."
Fifamoivoizana amin'ny lehibe dimy London Ny zotra fantsona – Afovoany, Jobily, Avaratra, Piccadilly ary Victoria – dia tratran'ny fitokonana voarindra androany, raha toa ka andrasana ny korontana bebe kokoa amin'ny rafi-pitaterana an-drenivohitra Britanika amin'ny faran'ny herinandro.
Araka ny filazan'ny Rail Maritime and Transport Union (RMT), izay nitarika ny fitokonana dia maro amin'ireo mpikambana no tsy afa-po tamin'ny lamina vaovao.
Fitaterana mankany London (TfL), ny sampan-draharaham-panjakana miandraikitra ny fitateram-bahoaka ao an-tanàna, dia naneho ny fahadisoam-panantenany manoloana ny fanapahan-kevitry ny RMT. Tao anaty fanambarana iray, TFL nilaza fa ny lisitra vaovao dia nampidirina tamin'ny mpamily Tube tamin'ny volana aogositra ary nahitana toky maromaro ho an'ny mpiasa momba ny fiarovana ny asa.
Nanelingelina ny serivisy manerana ny fandehanana London amin'ny Black Friday, iray amin'ireo andro fiantsenana be olona indrindra amin'ny taona, miaraka amin'ny varotra mandeha amin'ny fivarotana maro. Nisy tamin’ireo mpandray anjara fitokonana no tazana nanao picket eny amin’ny tobim-piantsonana miaraka amin’ny sorabaventy sy saina.
LondonNy ben'ny tanàna ihany koa dia nanohitra ny fialan-tsasatra. "Ity hetsika fitokonana tsy ilaina ataon'ny RMT ity dia miteraka fanakorontanana miely patrana ho an'ny Londres an-tapitrisany ary hamely ny varotra, ny kolontsaina ary ny fandraisana vahiny any Londona amin'ny fotoana ratsy indrindra," hoy i Sadiq Khan tao amin'ny Twitter.
Hitohy amin’ny sabotsy izao ny fitokonana, ka mbola hisy ny fidinana an-dalambe amin’izao ankatoky ny fetin’ny Krismasy izao.
"Ny mpanjifa mila mandeha dia mampiasa TFL Manoro hevitra ny serivisy hanamarina alohan'ny handehanany, manome fotoana bebe kokoa amin'ny diany, ary mandeha amin'ny fotoana mangina kokoa raha azo atao, ”hoy i TfL, ary nampiany fa ny olona ao Central London dia nanoro hevitra "handeha, bisikileta na mampiasa e-scooter fanofana" fa tsy mampiasa ny Tube.